Blockchain Izindaba 30.05.2018 - Blockchain Izindaba
Kraken Daily Market Umbiko 30.05.2018
$180M adayiswa kuwo wonke ezimakethe namuhla
Vakashela isigaba Mayelana on blog yethu ukuze uthole olunye ulwazi mayelana Kraken Daily Market Umbiko lapha
komthetho German wathola $ 14M ezintweni azithengisayo zezimpahla cryptocurrency ashaqe
Iziphathimandla German baye nje wenza emhlabeni $10 million ukudayiswa Bitcoin ukuthi bababamba e nophenyo lobugebengu. Futhi, bamenzela ezengeziwe $4 million ukuthengisa ezinye cryptocurrencies.
I cryptocurrencies ukuthi kwathengwa kuhlanganisiwe 1,312 Bitcoins iningi ashaqe e wokulwa isiteji ngokuthi LuL.to, okuyinto udayisa ngokungemthetho eBooks copyright kanye audiobooks ngamanani aphansi kakhulu. Isayithi ibibanjwe bavala ngoJuni ngonyaka odlule, opharetha yayo baboshwa futhi izimpahla zayo wangena Isikhwama ukuthi ngokuvamile esetshenziselwa amaphoyisa nekuniketwa.
Ukudayiswa zenzeka esikhathini kwezinyanga ezimbalwa, ochungechungeni ezingaphezu kuka 1,600 ukuthengiselana on a yesikhulumi cryptocurrency ukuhweba German.
AIgatha usuku crowdsale sekumenyezelwe
AIgatha crowdsale izovulwa 5. Juni 2018. AI Izikhungo Ipulatifomu Ngokusekelwe Umqondo Weningi System
AIgatha ubulokhu kathisha basakaza futhi intelligence yokufakelwa isikhathi esingaphezu kweminyaka engu-, iningi ezisetshenziswa ocwaningweni zezemfundo. Manje hlanganisa ngayo blockchain ukudala esinye ubuchwepheshe obusha lonke. Siye senza umzamo popularize ngobuchwepheshe, kuhlomisa abantu ikhono creativities yokugcwalisa, ekuthuthukiseni izinga zokuphila kwabantu, futhi andisa ukuthuthukiswa impucuko global.
331 Japanese zimali mfihlo limenyezelwe $ 1M noma ngaphezulu inzuzo e 2017
INational Tax Agency of Japan libike ukuthi 331 aphume 549 zimali ngamanye mfihlo bhalisiwe ayeyitholile ezingaphezu kuka 1 izigidi zamaRandi ezingu e inzuzo ngidayisa zezimali virtual.
Ithimba intela ophethe uphenyo wathi ukuthi 2017 imisebenzi mfihlo ukuhweba kuhlangene Bitcoin nokutshala izimali inzuzo zokuthuthukisa GDP Japan by 0.3%
Thumela Previous:Yini cryptocurrency kuthiwa zimali belulekwa ukuthengisa, futhi iyiphi ukugcina?
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 31.05.2018
Juni 10, 2018 ngesikhathi 2:37 AM